ဖေါ်ပြချက်:universal ကားကို DVD Player ကို,Universal စီးရီးများအတွက်ကားတစ်စီး Player ကို,6. လက်မကား DVD Player ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd > 6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player
7 ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်: ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ - 6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player များအတွက် 1. မော်တော်ကား DVD ။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။
2. 6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး DVD အဘို့ဤပုံစံသည်ယခုအခါအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI ကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ 6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player ဘို့ဒီကား DVD အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အကြောင်းကို 20000 ကိုအပိုင်းပိုင်းတစ်လ, ဒါကြောင့်, ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကဒီမှာနှင့်ကူညီပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player များအတွက် 3.Our ကားတစ်စီး DVD, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်, ဂျာမနီ, အီတလီကနေအများကြီးတန်ဖိုး clients များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြ , အီရန်, ပါကစ္စတန်, ဒူဘိုင်း, အစ္စရေး, ကိုရီးယား, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိန္ဒိယ, ဘရာဇီး, etc ။ 6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး DVD အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်။
4. ယခုငါတို့ 300 ကျော်မော်ဒယ်များအပေါငျးတို့သမော်ဒယ်များအပါအဝင် android ကားကို DVD player ကိုပေး။ တည်ငြိမ်မြန်ဆန်နောက်ဆုံးပေါ် software နှင့်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားကို DVD player ။ အရည်အသွေးအာမခံချက်ပေးရန်, 6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player ဘို့ဒီကား DVD အီး / FCC သည် / RoHs / E-မာကုလက်မှတ်ရှိပါတယ်။ အရည်အသွေးငါတို့ဝိညာဉ်ပါ!
6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး DVD ၏ရုပ်ပုံများ
6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး DVD ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်း
universal ကားကို DVD Player ကို Universal စီးရီးများအတွက်ကားတစ်စီး Player ကို 6. လက်မကား DVD Player ကို 7.1 က Universal ကားကို DVD Player ကို Land Cruiser ကားကို DVD Player ကို Chery E3 ကားကို DVD Player ကို Subaru WRX ကားကို DVD Player ကို Vitara အော်တို DVD Player ကို